March 2020 – NMDC
Monday March 30th, 2020 By NMDC Editor Uncategorized Comments Off
Thursday March 19th, 2020 By NMDC Editor Uncategorized Comments Off
Covid – 19 ဗိုင်းရပ်စ်ကိုစိုးရိမ်တာကြောင့် မတ်လ ၁၇ရက်နေ့ညပိုင်းထိ တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားသမဂ္ဂတချို့က စာမေးပွဲရက်ရွှေ့ ဆိုင်းဖို့ အုတ်အော် သောင်းနင်း တောင်းဆို ခဲ့ကြပေမယ့် ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ အမျိုးသားစီမံခန့်ခွဲမှုပညာဒီဂရီကောလိပ်မှာတော့ သက်ဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်တွေအလိုက် စာမေးပွဲကိုပုံမှန်အတိုင်း ဖြေဆိုနေကြပါတယ်။ စာမေးပွဲအတွင်း အရေးပေါ်အခြေအနေ ဖြစ်လာခဲ့ပါကလည်း ကျောင်းနဲ့မျက်နှာ ချင်းဆိုင်မှာ ဂန္ဒီဆေးရုံကြီးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် ဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ကုသနိုင်ရေးအတွက် ဆေးရုံအုပ်ကြီးနဲ့ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ထားပါကြောင်း သိရသည်။ Covid – 19 ဗိုင်းရပ်စ်ကိုစိုးရိမ်မှုတွေကြားက တက္ကသိုလ် ဒီဂရီကောလိပ်တွေရဲ့ စာမေးပွဲ စတင်ကျင်းပ Covid – [...]
Tuesday March 17th, 2020 By NMDC Editor Uncategorized Comments Off
Protect Yourself, Your family, Your beloved ones and your Country. These are7simple steps to protect yourself and others from COVID-19.7simple steps to protect yourself and others from COVID-19. These are7simple steps to protect yourself and others from COVID-19. Posted [...]
Wednesday March 11th, 2020 By NMDC Editor Uncategorized Comments Off